INTEL HD GRAPHICS 2000 ဘို့ကားမောင်းသူ DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
အဆိုပါ Intel HD Graphics 2000 များအတွက် software ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့နည်းလမ်းများ
WhatsApp ကိုအသုံးပြုသူများသည်မှတ်ပုံတင်ထက်ပိုမိုတစ်ဘီလီယံဖိုး - ကောင်းကင်တမန်၏ကျော်ကြားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့ပြတဲ့အထင်ကြီးပုံ။ developer များကွဲပြားခြားနားသောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းကို client applications များများကိုပေးစွမ်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်များက၎င်း၏ features တွေ Device ရဲ့ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံဝင်ရောက်ဖို့ကိုအသုံးပြုပါ။ တက်ဘလက်ကို PC ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ထားတဲ့ operating system ကို Android မှာ running သည်နာမည်ကျော် tool ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။
ကြီးမားသောလူကြိုက်များ VotsAp ရှိနေသော်လည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပစ်လွှတ်ကတည်းကလွန်ပြီတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့, ယနေ့အထိ developer များ messenger ကို Tablet ကို PC ပေါ်မှာက၎င်း၏ဒုက္ခ-အခမဲ့တပ်ဆင်သေချာစေရန်ပျက်ကွက်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်အခွအေနေပေမယ့်, အန်းဒရွိုက်အောက်မှာ run ပေးနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအင်္ဂါရပ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်, ကို "ဆေးလုံး" နဲ့သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်များအတွက်နည်းလမ်းထောက်ပံ့ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုနေဆဲဖြစ်နိုင်ပေမယ်အချို့ကိုသင် "လှည့်ကွက်" ကိုအားကိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
3G / 4G-မော်ဂျူးကို Android-တက်ဘလက်အပေါ် WhatsApp ကို Install လုပ်နည်း
SIM ကဒ်-ကဒ်၏ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကို slot ကအတူတပ်ဆင်ထားတဲ့ (s) ကိုပေါ်ကို Android နှင့်အတူ Tablet ကို PC ကိုအသုံးပြုသူများအများဆုံးကိစ္စများတွင်သင်၏အကိရိယာတပ်ဆင် VotsApa နှင့်အတူအခက်အခဲမရှိကြပါဘူး။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် messenger ကို install လုပ်ဖို့ SMS ကိုလက်ခံရရှိရန်တက်ဘလက်အပေါ်အခွင့်အလမ်းများရှိပါတယ် အကယ်. စမတ်ဖုန်းအပေါ်ကဲ့သို့တူညီသောခြေလှမ်းများယူသင့်ပါတယ်။
Read more: အန်းဒရွိုက်-စမတ်ဖုန်းအပေါ် WhatsApp ကို Install လုပ်နည်း
WhatsApp ကို install လုပ်ပါတဲ့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း အသုံးပြု. ဖော်ပြထား devices များပိုင်ရှင်တွေရင်ဆိုင်ရရသောတစ်ခုတည်းသောအတွက်အသိပေးချက် - Market က Google Play မှဒေါင်းလုတ်လုပ် - ဤသတိပေးချက် "ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ဒီ app ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုများအတွက် optimized မဟုတ်ပါ"စတိုးဆိုင်များတွင်လျှောက်လွှာ-client ကို instant messenger ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြ။
တနည်းကား, 3G / 4G-မော်ဂျူးအများဆုံးကိရိယာများပေါ်တွင် VotsAp ရုံသတ်မှတ်ထားသောသတင်းစကားစနစ်အာရုံစိုက်ပါဘူး, ပြဿနာများကိုမပါဘဲလုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကို Google Store မှာမဖြစ်နိုင်ပါကနေ application တစ်ခုရလျှင်, ဆင်းမ်ကဒ်-ကဒ် slot နှစ်ခုမပါဘဲအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုလမ်းညွှန်တစ်ဦးနှင့်ပစ္စည်းများမှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုပါ။
3G / 4G-မော်ကျူးခြင်းမရှိဘဲက Android-တက်ဘလက်အပေါ် WhatsApp ကို Install လုပ်နည်း
ဒါခေါ်၏ပိုင်ရှင်များ "တစ်ခုတည်းသောက Wi-Fi ကို" Market က Google Play မှ VotsAp install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်စစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူကွုံရသောအခါ devices များ "ဒါဟာသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကိုမထောက်ပံ့ပါ":
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအထက်တွင်ပုံရိပ်မှာအဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်အန်းဒရွိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် apps များရရှိရန်လူအတော်များများ, အထူးသဖြင့်အခုမှစ, အခြားများ၏ရရှိနိုင်မှု၏သတိမထားမိဖြစ်ကြသည်စံအပြင်နဲ့အကျွမ်းတဝင်, နည်းလမ်းများတက်ဘလက်အပေါ်တစ်ဦးကို client application ကို WhatsApp ကိုတည်ထောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေ, ထိုသို့မှတ်ချက်ပြုရပါမည်, အချည်းနှီးဒါလုပ်ပါ။ လုံးဝနီးပါးမဆို android- တမန်များကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုနည်းလမ်းများရှိပါသည် "တက်ဘလက်။ "
Method ကို 1: Tablet ကို PC မှာ
APK ကို-file ကို - အောက်တွင်ညွှန်ကြားချက်အပေါ် Android အတွက် WhatsApp ကို install လုပ်ဖို့, တက်ဘလက်သူ့ဟာသူ, အထုပ်, client ကိုလျှောက်လွှာန်ဆောင်မှုများအတွက်အထုပျအပိုးဖွေစနစ်, နှင့်ကောင်းကင်တမန်၏ပိုင်ထိုက်သောဖြန့်ဖြူးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။ APK အား-ဖိုင်နှငျ့ ပတျသကျ. , Download ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းတရားဝင် website တွင် developer များ VotsApp ပေးသည်။
တရားဝင် site မှ WhatsApp ကို APK ကို-file ကို Download လုပ်ပါ
ကျနော်တို့ပန်းကန် (- Google Chrome ကိုဥပမာ) တွင်ထူထောင် Android အတွက်မဆိုကို browser အတွက်အထက်ပါ link ကိုမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ Tapan button ကို "NOW က DOWNLOAD" ဝဘ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်ရန်။
အဆိုပါကိုသွားပါ "ဒေါင်းလုဒ်များ" သို့မဟုတ်အစောပိုင်းကဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်များကိုများအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်ရွေးချယ်မှာ Android ဖိုင်တွဲများအတွက်မဆိုပွင့်လင်းဖိုင်မန်နေဂျာသည်။
တက်ဘလက်ယခင်ကလျှောက်လွှာတပ်ဆင်ခ option ကိုအမည်မသိရင်းမြစ်များမှ activated ထားပြီးမရှိသေးပေလျှင်, installation ကိုထွက်တင်ဆောင်လာသော၏မဖြစ်နိုင်၏အကြောင်းကြားရလိမ့်မည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျနော်တို့ရှေ့ဆက်:
Tapan "Settings" ကို စာသားသတိပေး;
ထို့နောက် switch ကိုသက်ဝင်စေ "အမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်";
ကျနော်တို့နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Play Store မှရရှိသောမဟုတ် app များကိုအသုံးပြုခြင်း၏အလားအလာအန္တရာယ်များအကြောင်းမေးမြန်းမှုကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမည် "အိုကေ";
နာမကိုအမှီ apk-file ကို VotsAp အားဖြင့် Tapan နောက်တဖန်။
installation ကိုတွန်းအားပေး applications များ၏စတင်လိုအပ်ချက်အတည်ပြုပေးရန်ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌ "Install".
Installer ၏ပြီးစီးဖို့ forward ။
ရွေးချယ်ခြင်း "ပြီးပြီ" အောင်မြင်သောကုသမှု၏အစီရင်ခံစာများမှာ။
အဆိုပါပန်းကန်ပေါ်တွင် install applications များစာရင်းဖွင့်ပြီးသူတို့တွင်အိုင်ကွန် WhatsApp ကိုရှာတွေ့ - messenger ကို run နိုင်ပါတယ်။
နှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက် "သဘောတူခြင်းနှင့် Continue" ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် VotsApom အားဖြင့်ပြနဦးမျက်နှာပြင်,
ကျနော်တို့တက်ဘလက်အပေါ် client ကိုလျှောက်လွှာကိုအသုံးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းစကားရ။ အဆိုပါအကြောင်းကြားစာကိုလျစ်လျူရှုသော Tapan ဖြစ်ပါသည် "အိုကေ".
ကောင်းကင်တမန်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှဝင်ရောက်ခွင့်နှငျ့အတူသူ့ကိုပေးဆက်လက်များအတွက် "ဆက်သွယ်ရန်" နှင့်အခြား module တွေက Android, ထိ "NEXT ကို" သင်တို့အဘို့အသတိပေးခံရပါလိမ့်မည်
နှင့် "Allow" လာမယ့်နှစ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android အတွက် WhatsApp ကိုမှအဆက်အသွယ်ထပ်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါပြီးသားဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု activated သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များဖလှယ်သည့်စနစ်အတွက်အကောင့်သစ်ဖန်တီးအားဖြင့်တမန်အတွက်ကို authorize ။
Read more: WhatsApp ကိုက c ကို Android-devaysa အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်နည်း
သင့်အကောင့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ကျွန်တော်တစ်ဦး Tablet ကို PC မှာပေါ်မှာရှိသမျှ features တွေ VotsAp မှအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရ! ဖောက်သည်များ၏ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းကိုမဆို Android ကို-စမတ်ဖုန်းကနေအမှန်တကယ်မျှကွဲပြားခြားနားသည်။
Method ကို 2: အဆိုပါ desktop သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်
တက်ဘလက်အတွက် WhatsApp ကို install လုပ်၏အထက်တွင်-ဖော်ပြထားနည်းလမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးရှိရာကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ပိုမိုအကြီးအကျယ်အရေးယူနှုနျးနိုငျသညျ - အသုံးပြုမှုမှအန်းဒရွိုက်ဒီဘာဂ်တံတား (ADB) စွမ်းရည်အသွင်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြခြင်းဖြင့်, သင့်ကွန်ပျူတာကနေမိုဘိုင်း operating system အတွက် messenger ကိုပေါင်းစည်းရန်။
ဒါဟာ software ကို tools တွေအမျိုးမျိုးမှတဆင့် WhatsApp ကိုတက်ဘလက်ရောင်းတပ်ဆင်ရန်အောက်ပါဖော်ပြထားနည်းလမ်းကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမအဘယ်သူ၏ function ကိုကွန်ပျူတာကနေ Android ထုတ်ကုန်အပေါ် applications များတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုသည်။ အထူးသဖြင့်, သင်အကြိမ်ကြိမ်ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်ရှိပစ္စည်းများအတွက်ရည်ညွှန်း, Window-utility ကို InstALLAPK ကိုသုံးနိုင်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အန်းဒရွိုက်-applications များက c ကွန်ပျူတာ Install
အဆိုပါညွှန်ကြားချက်ကိုလျှောက်လွှာရဲ့ features တွေကိုတဦးပါဝင်ပတ်သက်အောက်တွင်အကြံပြု ADB က Run ကို။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲလိုအပ်ပါကအထိရောက်ဆုံးတွေထဲကအမျိုးမျိုးသောစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်မှုအတွက်ကိရိယာတခုအဖြစ်ကို PC သုံးစွဲဖို့ Android-devaysa နှင့်အတူအပြန်အလှန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
ADB က Run ကို Download လုပ်ပါ
ကွန်ပျူတာ ADB က Run ကိုဆိုလိုတယ်တပ်ဆင်:
ရလဒ် installer ကို, စာရေးဆရာရဲ့ site ကိုရန်ဖြန့်ဖြူးအထုပ်အတူ archive ကို load အထုပ်နဲ့ run "Setup.exe";
ပထမဦးဆုံး window ထဲမှာကျနော်တို့ installer ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို";
အဆိုပါ installation wizard ကိုကလစ်ရဲ့နောက်ခြေလှမ်းအတွက် "Install";
အဆိုပါ PC ကို drive ပေါ်တွင်လွှဲပြောင်းအစီအစဉ်ကိုဖိုင်များ, ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်အတူတစ်တိုးတက်မှုဘားနဲ့ window ၏မျှော်မှန်းထားသည်ပြီးစီး;
အဆိုပါမဆိုစစ်ဆင်ရေးပြတင်းပေါက်၏အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာများ ADB က Run ကိုအတည်ပြု installer ကိုထုတ်ပေးမထားဘူး။ အဆိုပါအေးဂျင့်ကို install ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ, သင်ကို PC စနစ် partition ကိုဖွင့်နိုင်သည် "Explorer ကို" - ယခင်ညွှန်ကြားချက်မှတ်ပြီးနောက်လက်ရှိဖိုင်တွဲရှိသင့်တယ် "Adb_run".
ထို့အပြင်က Windows desktop ပေါ်က shortcut ကိုအလိုအလျောက် tool ကို run ဖို့အသုံးပြုကြောင်း installer ကို၏လုပျငနျးရဲ့အဆုံးမှာဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
တက်ဘလက် mode ကိုကိုသက်ဝင် "Debugging ကို USB"။ ဤသည်စစ်ဆင်ရေးကို Android running စမတ်ဖုန်းကဲ့သို့တူညီသောထုံးစံ၌ဖျော်ဖြေနေသည်။
ကွန်ပျူတာရန် "ဆေးလုံး" ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းကို install, ADB ကမှတဆင့် "ကြီးမားသောအစ်ကို" နဲ့ conjugation တက်ဘလက်ပေး။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android ထုတ်ကုန်အပေါ် ADB ကယာဉ်မောင်း Installing
ဆိုက် developer WhatsApp ကို APK ကို-file ကို client ကို applications များတမန်ကနေသင့်ရဲ့ PC ဖို့ ROM ကို download လုပ်ပါ။ ဒီအလုပျကိုအောက်ပါလင့်ခ်ကိုသွားပါနှင့်ပွင့်လင်းခလုတ်ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါရန် "NOW က DOWNLOAD":
APK အား-file ကို WhatsApp ကို Android app များတရားဝင် site မှ Download
ရှေ့ခြေလှမ်းဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်ရရှိသောမိတ္တူ WhatsApp.apk အောက်ပါလမ်းကြောင်း:
ကို C: adb_run App ကို
directory ကို အကယ်. "App ကို" ဖိုင်တွဲထဲမှာ "Adb_run" အဘယ်သူမျှမက, ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်!
အဆက်ပြတ်သည့်အခါချိတ်ဆက်ပါကွန်ပျူတာတစ်ခုဆီသို့တက်ဘလက်။ Desktop ပေါ်မှာအိုင်ကွန်အပေါ် ADB က Run ကို, ကို double-click နှိပ်. Run windose ဆိုလိုသည်။
စာသားနောက်ကွယ်မှသတ်မှတ်ထားကိရိယာ screen ပေါ်မှာလက်ဗွေ RSA key ကိုအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်ချက်နှင့်အတူသတိပေးခံရအခါစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားကိုအကြောင်းကြား "အမြဲတမ်းဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာ debugging ကိုခွင့်ပြု" နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
တစ်ခုလုပ်လယ်ပြင်၌ "Input:" အောက်ခြေ Das Run ကိုမှာကီးဘုတ်က c ၏နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပါ "11"လျှောက်လွှာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှသက်ဆိုင်ရာ "Install / Uninstall ကို Android App (APK ကို)"နှင့်စာနယ်ဇင်း "Enter".
ထို့နောက်ရိုက်ထည့်ပါ "2" ထိုသို့သောအားဖြင့်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းကီးဘုတ်, "APK ကို Install" လျှောက်လွှာများကအဆိုပြုထားတဲ့စာရင်းထဲက။
လာမယ့်နာမတော်ကိုကွင်းခတ်မှာပြထားတဲ့နံပါတ်ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ WhatsApp.apk။ အဆိုပါ directory ထဲတွင်ညွှန်ကြားချက်၏ခြေလှမ်း5မှာပါလျှင် "App ကို" VotsApa APK ကိုဖိုင်တွေမှတပါးအဘယ်သူမျှမကအခြားကသညျးမခံနိုငျသညျ - "1"။ တက်ဘလက်တွန်းအားပေးအတွက်ပေါင်းစည်းမှု messenger ကို client ကိုစတင်ရန် "Enter".
ကျနော်တို့ကောင်တာများ၏ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးများအတွက်တစ်ဦးတိုးလာသဖြင့်လိုက်ပါသွား, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလီကေးရှင်းပိတ်သိမ်း device ကိုမျှော်လင့်ထား။
အဆိုပါအကြောင်းကြားစာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးပေါ်မှာ Run ကိုပြတင်းပေါက်, Das ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် "အောင်မြင်မှု"။ ကီးဘုတ်ပေါ်မဆို Key ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာကနေ "ဆေးလုံး" ကို disable ။
, မျက်နှာပြင်တက်ဘလက် PC ကိုသော့ဖွင့်ထည့်သွင်း applications များစာရင်းကိုသွားနှင့် Android-သူတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတို့တွင် icon တစ်ခု၏ရှေ့မှောက်တွင်သိရှိနိုင်ရန် "WhatsApp ကို"။ ယင်း၏အိုင်ကွန် tapnuv တမန်ကို run ။
ယင်း၏အခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးပြုခြင်း - ထို Tablet ကို PC အတွက်ထောက်ခံမှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးမှုစနစ်လျစ်လျူရှု, အမစ်၏ပြဿနာ, ခွင့်ပြုချက်နှင့်သည့်အခါနောက်ထပ်မှလှည့်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Android အတွက် WhatsApp ကို developer များအားဖြင့်ထောက်ခံမှုဆေးပြားများ၏မရှိခြင်းရှိနေသော်လည်း "ဆေးလုံး" ကို messenger ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဝန်ဆောင်မှု၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကိုအသုံးပြုပါ။ လုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်မများနှင့်မကျွမ်းကျင်သူတွေပဲအသုံးပြုသူများသည်အပါအဝင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: The Map of Mathematics (အောက်တိုဘာလ 2019).